Mepụta Ngwa Ngwaọrụ Zuru Okè | Martech Zone
Na nke na-esote redio ngosi anyị ga-atụle Starbucks Mobile ngwa nke garn 2012 Mobile Marketer nke Afọ Award. N'uche m, ọ bụ nnukwu ngwa mkpanaka nke jikọtara ọdịiche ahịa n'etiti ịzụ ahịa n'ịntanetị na ụlọ ahịa.
Atụmatụ ndị na-eme ka ngwa ahụ nwee ọganiihu
usability - ngwa ahụ nwere ogwe igodo ụzọ dị n'ofe ala yana ihuenyo ụlọ nke gosipụtara ngosipụta nke ngwa ahụ dabere na ọrụ onye ọrụ. Ngwa a nwere enyo doro anya nke ọma na ntakịrị ntakịrị - dị mma maka onye na-agagharị ma ọ bụ jiri mkpịsị aka nwere abụba.
Ịkwụ ụgwọ ụgwọ - ngwa ahụ jikọtara ya na iOS Passport App ma mee ka ọ dị mfe iji maka ịkwụ ụgwọ. M nwekwara ike mejupụta akaụntụ m site na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ PayPal ozugbo n'ime ngwa ahụ na nkeji nkeji. Ngwa ahụ na-eji kaadi ụgwọ ọrụ m ugbu a eme ihe ọ dị mma na ọ dịla azụ dabara na usoro kaadị ntuziaka.
Ụgwọ Ọrụ - jikọtara ụgwọ ọrụ iTunes yana ịkwanye ọkwa bụ ikuku. Mgbe m zụtara kọfị zuru ezu, a na-enye m abụ nke m nwere ike ibudata ozugbo site na ịpị ya. Ọzọkwa, ikike ịmere iko ahụ na kpakpando dị n'ime ya bụ ihe mara mma!
Chọpụta atorlọ Ahịa - na njem na nso nso a na Florida, enwere m nsogbu na maapụ Apple na Google na-enye Starbucks kacha nso. Enweghị nchekasị, ngwa Starbucks gbanyere geo ma nwee ike ịchọta Starbucks kacha nso na njem ahụ.
Onyinye - Enwere m ike iziga onye ọ bụla onyinye site na ngwa ahụ site na email!
ngwaahịa - ma ọ bụ ihe ọ drinksụ drinksụ, kọfị ma ọ bụ nri, ngwa ahụ na-enye ozi niile ịchọrọ na menu Starbucks.
favorites - I nwere ikike ichekwa ihe ọ drinksụ drinksụ kachasị amasị enyi gị. Nke ahụ dị egwu dị ka onye ọchụnta ego nke na-ezukọ na Starbucks!
The zuru okè Mobile App
Ọ bụ ezie na nke a bụ ngwa dị ịtụnanya maka ịnyagharị ahịa ụlọ ahịa ọzọ na ịnakọta ego kaadị, echere m na enwere ụfọdụ atụmatụ nwere ike ime ka ngwa ahụ dịkwuo ike ịchụkwu ihe ịntanetị na in-store:
Ntinye-ntinye - Ọ bụrụ na m nwere ike ịhụ Starbucks dị m nso ma hụ ma ndị enyi m enyochala, ọ ga-eju anya. Ntinye ntinye nke akụkụ anọ ga-enye aka. Na ngwụsị izu, ọ ga-amasị m ịmasị ụlọ ahịa Starbucks naanị ma gakwuru nke otu enyi m na-atụgharị.
Social - N’ụzọ dị ịtụnanya, ngwa mkpanaka ahụ enweghị njikọta mmekọrịta mmadụ na Facebook, Twitter, Google+, Foursquare, wdg. Nke a ga-aba uru maka nyocha na onyinye. Ikekwe a ngosi ozugbo nke a zuo na ngwa na-agwa ndị enyi m ihe Starbucks m na!
Geofencing - Ebe ọ bụ na ngwa ahụ enweela ozi ịkwanye, gịnị ga - eme m ihe m ga - enye ma ọ bụrụ na m na - abịa nso na Starbucks?
iwu - Ebe ọ bụ na enwere m ihe ọ myụ myụ kachasị amasị m na nri nri kachasị amasị m etinyegola na ngwa ahụ, enwere ihe kpatara m ga-eji kwụ n'ahịrị ma nye iwu na Starbucks? Gini mere ị ga-eji wepụta ihe mmado n'otu ebe ire ere nke Barista nwere ike bulie ma mezuo! Ha nwere ike ịkpọpụta aha ahụ naanị ịnwere ike ịtụtụrụ mmanya gị.
Tags: imewe ngwa ngwa ngwastarbucksStarbucks mobile ngwa
Abụ m onye ofufe nke -idea- nke Geofencing - M nnọọ na-achọ na ndị ọzọ Jeriko ga-ahu nagide ya.